क्रान्तिवीरको सपना : सुवाषचन्द्र बोसको अनुमान सत्य भयो « Deshko News
क्रान्तिवीरको सपना : सुवाषचन्द्र बोसको अनुमान सत्य भयो
सुवाषचन्द्र बोसको अनुमान सत्य भयो । दोश्रो विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध भन्दा विनाशकारी भएर धरतीमा ओर्लियो । पहिलो विश्वयुद्धको कालमा छिँटा समेत नपरेको नयाँ भूभाग पनि युद्धको भुँवरीमा छि¥यो । त्यो थियो जापान ।
पहिलो विश्वयुद्धमा कतै उपस्थित नभएको जापान दोश्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकासमेतको आँखामा चढिसकेको थियो । एशियामा जापानले, युरोपेली मुलुकका ससाना उपनिवेश मात्र होइन, चीन, कोरिया र भारत जस्ता देशमा पनि आक्रमण गरेको थियो र चिताइनसक्नुको सबै मुलकलाई टक्कर दिएको थियो ।
चीन र कोरियामा जापानको अर्को नाउँ नै ‘नरसंहार’ बन्यो । गाउँका गाउँ आगो लाएर समाप्त पारेर जापानले चीन र कोरियालाई तहसनहस पारेको थियो । विश्वमा कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्य भनी नाम कहलिएको बेलायतलाई जताततै आच्छु आच्छु खेलाएको थियो जापानले ।
सुवाषचन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका सभापति थिएनन् त्यतिबेला । तर सिङ्गो भारत उनकै नारामा ओर्लिएको थियो । आजाद हिन्द फौज स्थापना गरी उनले बेलायतलाई टक्कर दिइरहेका थिए ।
रामप्रसादको चासो सुवासचन्द्र बोसतिरै बढेको थियो । उसले सुवाषचन्द्र बोसलाई देखेको थियो । भेटेको थियो । उनको मुक्ति सङ्ग्रामको कुरो सुनेको थियो ।
तर नेपाल सरकारले विश्वयुद्धमा बेलायती सरकारलाई सघाउने निर्णय ग¥यो । नेपाल कतै नलागोस्, तटस्थ बसोस भन्ने चाहना थियो रामप्रसादको । त्यस्तो हुँदा सुवाषचन्द्र बोसको तागत बढ्थ्यो ।
युद्धको विभिषिका भारतको टाउकोमा आइसकेको थिएन । त्यसै हुनाले रामप्रसाद र उसको विदाइ टोली काठमाडाँै, अमलेखगञ्ज, वीरगञ्ज, रक्सौल हुँदै भारतीय रेलको बाटो विराटनगर छिरेर धनकुटा पुग्यो ।
सत्य बुझेको रामप्रसादले ऊदास आँखाले भर्तिको लाइनमा उभिएको युवा पङ्तिmलाई हेरेर भन्यो – डु अर डाई (गर या मर) । यो अङ्ग्रेजी पल्टनको नियम हो । यसमा कायरता नदेखाए ।
यात छातिमा बहादुरीको तक्मा लगाए या युद्धमा शहीद भएर नेपाल आमाको नाम राखे । अनुशासन नभएको फौजले कहिल्यै लडाईं जित्दैन । नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाएका छौं । दुनियाँका नयाँ रीत सिक्ने मौका पाएका छौ । सिक्ने अवसर कहिल्यै नगुमाउनु । …
आफ्नो अघिल्तिर उभिएका तन्नेरीहरू दशैंको मौलोमा बाँधिएका निरीह जनावर जस्ता लागे उसलाई ।
त्यसैले होला तल घोपा क्याम्पदेखि सँगै आएको पहिलो पटक नेपाल भित्रै युवा भर्तिको जिम्मा लिएर आएको गोरा अफिसरले मचक्क हात मिलाउँदै भन्यो, ‘थ्याङ्क यु अफिसर ।’ (अफिसर, धन्यवाद छ तपाईंलाई)
‘इट्स माइ ड्युटी, अफिसर’ (अफिसर, यो त मेरो कर्तव्य हो) । आइ ह्याभ कम फ्रम नेपाल आर्मी । ( म नेपाली सेनाबाट आएको हुँ । नेपाल गभर्नमेण्ट डिसाइड टु सपोर्ट द ब्रिटिस एम्पायर (नेपाल सरकारले बेलायती साम्राज्यलाई सघाउने निर्णय गरेको छ ।¬¬)
‘आपूmलाई अभर परेको बेला तिमीहरू जति पनि थ्याङ्क यू दिन्छौ नि मोरा हो । थ्याङ्क यू दिन पैसा लाग्दैन ।’ रामप्रसादले मनमनै भन्यो । ‘सुवाषचन्द्र बोसले यसको आधा नेपाली पाए तिमीहरूलाई ठाडो पुच्छर लाएर भगाई दिन्थे ।’
बाँसीखोराबाट रामप्रसादको सिङ्गै परिवार आएको थियो । छोराले गोरा सापसँग के कुरा ग¥यो परिवारको कसैले बुझेन । गोरा साप र उसका साथीहरू हिँडेपछि रामप्रसाद आफ्नो परिवार भएतिर आयो । आमाले उज्यालो अनुहारले छोरालाई सोधी, ‘तैंले गोरा सापको भाखा बोल्या हो कान्छा ?’
‘मैले अहिले घर जान मिल्दैन आमा । युद्धको रन्को नेपालमा आइसक्यो । हामी कसैले पनि छुट्टी लिन पाउँछुदैनौं । मैले भोलि बिहानै धनकुटा छोड्नु पर्छ । यताबाट म पाल्पा अनि पोखरा जान्छु । त्यहाँबाट काठमाण्डौ जानुपर्छ । अहिले मैले कसैलाई आपूmसँग लान मिल्दैन ।’
‘शहरमा केटाकेटी पढ्दै त छन् ?’ चन्द्रकुमारीले पनि अप्ठ्यारो नमानी सोधी ।
‘पढ्दै छन् । तँ सारै पीर नली । भोलि म यहाँबाट म पाल्पातिर लाग्छु । पाल्पाबाट पोखरा जान्छु । त्यहाँबाट म काठमाण्डौ फर्किन्छु । यो लडाईं चलुन्जेल छुट्टी नमिल्न पनि सक्छ । अङ्ग्रेज सरकारलाई दुई लाख पचास हजार फौज पठाएर सहयोग गर्ने भन्ने आदेश छ महाराज जुद्ध शमसेरको । पहिलो हुद्दाले पुगेन भने फेरि एकपल्ट यता आउनु पर्ने हुनसक्छ ।’
परिवारलाई डाँडातिर लगाएपछि रामप्रसाद आफ्नो टिम सहित बासस्थानतिर लाग्यो । बिहानै रामप्रसाद राईको भर्ति विदाइ कमिटी धरानतिर लाग्यो । उसको दोश्रो गन्तब्य थियो पोखरा ।
रेलको बाटो लामो हुने नै भयो । जोगबनीबाट छुटेको रेल पटना घुम्दै गोरखपुर पुगेको थियो । समुच्चा पश्चिमका लागि बेलायतीहरूले गोरखपुरमा भर्तिकेन्द्र खोलेका थिए । भर्ति गर्ने अधिकारी बागलुङतिरको एउटा जमादार थियो । उसको निगरानी गर्न गोराहरू आफैं बसेका थिए ।
‘हाम्रो सरकारले बेलायत सरकारलाई २ लाख ५० हजार प्रशिक्षित, अर्धप्रशिक्षित जवान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
म नेपाल सरकारको तर्फबाट भर्ति नियन्त्रण÷निर्देशनको काममा खटिएको अफिसर हुँ । पूर्वमा तपाईंहरूले घोपामा क्याम्प खोलेर यो कामलाई सजिलो गरिदिनु भएको छ । तर पश्चिमतिर कतै क्याम्प खोल्नु भएको छैन ।
भर्तिलाई हाम्रो भित्री गाउँसम्म पु¥याउने हो भने तपाईंहरूले पश्चिममा कम्तिमा पनि तीन क्याम्प खोल्नु पर्छ । एउटा पोखरामा । त्यहाँ तपाईंहरू क्याम्प खोल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसको कामलाई गति दिनु पर्छ ।
गोराले पोखराको रणनीतिक महत्व बुझेर हो वा नबुझेरै हो ‘यस, यस, ओके ओके’ भनिरह्यो ।
‘अर्को क्याम्प तपाईंहरूले सीमाना नजिकै स्थापना गर्नु पर्छ । कहिल्यै तराई नदेखेका आफ्ना युवाहरूलाई हामी एक्कै चोटी गोरखपुर पठाउन सक्दैनौं । उनीहरूको सुरक्षाको विषयमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ ।
‘तपाईंहरूले भर्ति केन्द्र खोल्न ढिला गर्नु भयो भने हामी दुई लाख पचास हजार नयाँ भर्ति पु¥याउन सक्दैनौं ।’
‘मसँग छस् र लामो समयसम्म रहिरहने छस् । तैले सबै कुरा बुझ्नु राम्रो हुन्छ । यसबाट मैले दुइटा फाइदा निकाल्ने सोच बनाएको छु । एउटा त सबै क्याम्पको स्थापना नेपाली सेनाका रामप्रसाद राईले गरेका हुन् ।
उनी आफैँ गोरखपुर गएर बेलायती प्रतिनिधिसँग कुरा गरेर क्याम्प यहाँ ल्याएका हुन् । भर्ति जाने नेपाली भाइहरूका सुविधाका लागि उनले यो काम गरेका हुन् भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।
ठ्याक्कै हप्ता दिन लाग्यो पोखरा पुग्न । नेपाल प्रवेश गरेपछि दिनभरि हिँडेर बेलुका खस्यौलीमा बास बस्यो रामप्रसादको टोली । नयाँ भूगोल, नयाँ प्रकृति, उकालो ओरालो फेरि उकालो अनि फेरि ओरालो । नेपालको विशेषता भनेकै चारकोसे वनको मैदान, चुरेका साँघुरा डाँडाहरू, घण्टा घण्टामा प्रकृति फेरिने महाभारत अग्ला र चाक्ला डाँडाहरू, ठूला ठूला नदीहरू, ठाउँ ठाउँ ठूला ठूला टारहरू, पोखरी र
छक्क प¥यो रामप्रसाद ! नाकैमा जोडिन आएको हिमाल । हिमाल होइन, एउटा लामो हिमशृङ्खला ।
‘मातृभूमि ! अहा ! मातृभूमि ।’ रामप्रसाद मनमनै बर्बरायो ।
श्वेतधवलको लामो शृङ्खला देखेर भावुक भयो रामप्रसाद ।
‘नेपालको यति भित्र, उनीहरूका लागि अप्ठ्यारो बाटो, आउन मान्लान् र गोराहरू !’ लप्टनले शङ्का गरेको ठिकै लागेको थियो रामप्रसादलाई आपूm हिँडेर आएको बाटो सम्झिँदा । तर उसलाई विश्वास थियो पोखरामा पाइलो टेकेपछि अनि बिहानीको हिमाल दर्शन गरेपछि उनीहरू यहीँ स्थायी बसोबास गर्नु पर्छ भन्ने छन् ।
बिहानको पहिलो कार्यक्रम सफल भयो । रामप्रसादले मनमनै भन्यो, ‘यसरी नै सफलताले मलाई साथ देओस् ।’
सुन्दर बिहानी टर्नु थियो ट¥यो । भर्ती निगरानी टोलीको खानपानको व्यवस्था लप्टनकै निवासमा गरिएको थियो ।
‘लप्टन साप, खालि सरकारले प्रयत्न गरेर मात्र भर्ति सफल हुँदैन । महाराजले ‘नेपालले २ लाख ५० हजार फौज पठाएर बेलायती सिंहासनलाई सहयोग गर्छ’ भनेर भनिसक्नु भएको छ । यो सङ्ख्या पु¥याउन सरकारको एक्लो प्रयत्नले सक्दैन । हाम्रा तिर थरी भनिन्छ तीन चार गाउँको स्थानिय प्रशासन हेर्ने गाउँ बुढालाई ।
यता पनि त्यस्तो केही होला । तिनलाई भेला गर्नुस् । म उनीहरूलाई सम्झाउँछु । म यहाँ अलिक दिन बस्छु । गोरखपुरबाट गोरा अफिसरहरू आउने भए भने उनीहरूसँग यहीँ कुरा सक्याउँछु ।
श्री ३ महाराजसँग सिधै भेटन पाउने हाकिमलाई रिझाएर कप्तान हुने सपना देखेको लप्टनले कुनै क्षेत्रमा पनि कमी गरेन । रामप्रसादको चिठी बोकेर तीन जना केटाहरू बाटा लागेपछि उसले कटुवाल खटाएर १५ जना प्रभावशाली गाउँ बुढाहरू भेला ग¥यो ।
‘दाजु भाइहरू’ रामप्रसादले संवोधन ग¥यो, ‘म, महाराजले खटाएर, भर्ति निरीक्षण गर्न यहाँ आएको हुँ । महाराजले बेलायती सरकारलाई, बेलायती सिंहासनको रक्षा गर्न २ लाख ५० हजार जवान पठाउँछु भनी वचन दिनु भएको छ । राजाको वचन राजाज्ञा त हो नै ।
सँगसँगै यो हामी सबैका लागि मौका पनि हो । मर्ने बाँच्ने भन्ने कुरो आफ्नो हातमा हुँदैन । पल्टनमा गएर मरिन्छ नै, यहाँ बस्ता बाँचिन्छ भन्ने हुँदैन ।
हाम्रा केटाहरू पल्टनमा जान्छन् । बेलायतले अहिले गएका सबैलाई पालेर राख्तैन । युद्ध सकिएपछि फर्किएर आउनेले टन्न पैसा बोकेर आउँछन् । यति मात्र होइन, बेलायती फौजमा लाग्दा हाम्रा भाइछोराले राम्रो तालिम पाउँछन् ।
राम्रो तालिम पाएको फौजीले जति पुरानो भू.पू. भए पनि देशको रक्षा गर्छ । त्यसैले धेरै भन्दा धेरै भाइछोरालाई भर्ति गराएर महाराजको बोलीको मान राखौं ।
हाम्रा भाइछोरालाई तालिम प्राप्त जवान बनाउँ । महाराजको बोलीको इज्जत राखौं । यसपालि राम्रो भर्ति भयो भने पोखरामै स्थायी भर्ति केन्द्र खोल्न म अङ्ग्रेजहरूलाई मनाउने छु ।’
‘पोखरामै भर्ति केन्द्र खुल्छ’ भन्ने वाक्यले सबैलाई तान्यो । बुढाहरू तयार भए । सबैको अनुहार उज्यालो भएको थियो । रामबहादुरले अन्तिम वाक्य बोल्यो, ‘केही कुरा थप गर्न मन छ भने यो तिर्थबहादुरलाई भन्नु होला । यसले समय मिलाऊँछ । कम्तिमा पनि म यो हप्ताभरि यतै रहन्छु ।
अङ्ग्रेज अफिसर आइपुगे पनि नआइपुगे पनि हाम्रो भर्ति अभियान तुरुन्तै आरम्भ हुन्छ र जिल्लाका लप्टन साहबले यसको बन्दोबस्त मिलाउनु हुन्छ ।’
त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो ।
भोलिपल्ट खाना खाएपछि रामप्रसादले भेटघाट मिलाएकोे थियो ।
‘काका, चित्रबहादुर गुरुङले एक्लै भेट्न खोज्नु भएको छ ।’
रामप्रसादको काँधबाट एक मनको भारी हट्यो ।
‘लु, पठाई हाल ।’
‘मिल्नै नसक्ने, होइन ? तर हामीले मिलाउन जान्नु पर्छ ।’ रामप्रसादले भन्यो, ‘यो विश्वयुद्धले बेलायती साम्राज्यलाई नराम्ररी हान्छ । बेलायती साम्राज्य अब खण्डित हुन्छ र एक दशकमा त्यो एशियाबाट बाहिरिन्छ ।
ढिलो चाँडो मात्र हो, बेलायतीहरू भारत छोडेर जान वाध्य हुन्छन् । त्यस्तो स्थितिमा राणाहरूको सहाय यता ओरिपरि कोही हुँदैन । राणहरूसँग हुने युद्धका लागि हामीले आजैदेखि तयारी गर्नु पर्छ ।
राणा विरोधी युद्धको सबैभन्दा बलियो शक्ति भनेको बेलायती भू.पू. हरू नै हुन्छन् । भर्ति बढाऊँदा जुद्ध शमशेर र बेलायतीहरू खुशी हुन्छन्, यता हाम्रो भित्री तयारी पनि अघि बढ्छ ।’
‘छन्, त्यसमा प्रमुख हुनुहुन्छ एकदेव आले । तपाईंको शेरबहादुर जस्तै मेरो एकदेव आले ।’ चित्रबहादुरले छोटा उत्तर दियो । ‘ठिकै छ त्यसो भए । अब तिनै केहीसँग मिलेर तपाईं मुक्ति सङ्ग्रामको तयारीमा लाग्नुस् ।’